AMBOHIDRAPETO : Nokendain’ilay jiolahy ilay ramatoa, lasa ny entana sarobidy rehetra
Mpivady tratra hariva handeha hamonjy fodiana indray no lasibatry ny jiolahy ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin’ny valo ora alina, teny Ambohidrapeto. 19 août 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray avy tamin’ ireo niharam-boina dia jiolahy miisa telo nitondra zava-maranitra toy ny antsy miendrika sabatra irony no nanakana azy ireo. Avy hatrany dia niantso vonjy ilay ramatoa tamin’io saingy nokendain’ilay jiolahy anankiray no sady nambanan’izy ireo hofofoina ny ainy. Nilefitra moa ireto mpivady ireto ka nandohalika tamin’izy ireo no nanome izay teny am-pelatanana niampy ny sakaosy iray nisy ny entan’izy ireo hafa.
Vokany, lasan’ireo olon-dratsy ny finday raitra miisa roa, peratra volamena , vola misimisy izay tsy voafaritra loatra ny fitambarany ary ireo akanjo tany anaty kitapo. Raha ny fanazavana voaray ihany dia nilaza ireto farany fa somary nangingina ny toerana hany ka nanararaotra izay tsy izy ireo mpandroba noho ny fananana fotoana nampihorohoroana ireto lasibatra.
Taorian’izay dia nirohotra nitsoaka ireo olon-dratsy raha toa ka nitsoaka nanavotra ny ainy kosa ireto voaendaka noho ny tahotra mafy nahazo azy ireo. Araka ny fitarainana voaray teny amin’ny manodidina dia noho ny tsy fisian’ireo andrin-jiro mirehitra izay natao hanazava ny lalana isan-kariva no antony mahatonga ireo jiolahy mirongatra eny amin’iny faritra iny. Tsara mantsy ny manamarika hatrany fa toerana isany anjakan’ny tsy fandriam-pahalemana matetika ao anatin’ny Distrikan’Atsimondrano raha i Ambohidrapeto manokana no asian-teny. Manaitra ny tompon’andraikitra mahefa hatrany araka izany ny mponina eny an-toerana mba hizaha akaiky ary koa hitondra vahaolana .